I-china Pachira Macrocarpa Tree Tree Braid Pachira mveliso kunye nabenzi | Intyatyambo enelanga
IPachira macrocarpa sisityalo esinembiza enkulu, sihlala sisibeka kwigumbi lokuhlala okanye kwigumbi lokufundela ekhaya. I-Pachira macrocarpa inentsingiselo entle yethamsanqa, kulungile kakhulu ukukhulisa ekhaya. Elinye lawona maxabiso abaluleke kakhulu kwi-pachira macrocarpa kukuba inokubunjwa ngobugcisa, oko kukuthi, ii-3-5 zezithole zingakhuliswa kwimbiza enye, kwaye iziqu ziya kukhula zide ziboshwe.
1.Size iyafumaneka: 3/5 aluka (ubukhulu 2-2.5cm, 2.5-3cm, 3-3.5cm, 3.5-4.0cm)
2. Ingcambu engafaniyo okanye icocopeat kunye namagqabi ziyafumaneka, kuxhomekeke kwiimfuno zabathengi.
Packaging: ibhokisi ukupakisha okanye netroli okanye iikreyiti iinkuni ukupakisha
Ixesha lokukhokela: iingcambu ezingenanto iintsuku ezi-7-15, kunye necocopeat kunye nengcambu (ixesha lasehlotyeni iintsuku ezingama-30, ixesha lobusika iintsuku ezingama-45-60)
Ukunkcenkceshela ikhonkco elibalulekileyo kulolongo nakulawulo lwe-pachira macrocarpa. Ukuba isixa samanzi sincinci, amasebe kunye namagqabi akhula kancinci; ubungakanani bamanzi bukhulu kakhulu, obunokubangela ukufa kweengcambu ezibolileyo; ukuba inani lamanzi liphakathi, amasebe kunye namagqabi ayandiswa. Ukunkcenkceshela kufuneka kuhambelane nomgaqo wokugcina umanzi kwaye ungomi, kulandelwe ngumgaqo "ezimbini ezingaphezulu kunye ezimbini ezingaphantsi", Oko kukuthi, amanzi ngakumbi kumaqondo obushushu aphezulu ehlotyeni kunye namanzi ambalwa ebusika; izityalo ezikhulu neziphakathi ezikhula ngamandla kufuneka zinkcenkceshelwe ngakumbi, izityalo ezitsha ezimbizeni kufuneka zinkcenkceshelwe kancinci.
Sebenzisa itoti yokunkcenkceshela ukutshiza amanzi emagqabini rhoqo emva kweentsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 ukwandisa ukufuma kwamagqabi nokwandisa ukufuma komoya. Oku akuyi kulungiselela kuphela inkqubela ye-photosynthesis, kodwa kuya kwenza amasebe kunye namagqabi abe mahle ngakumbi.
Egqithileyo Isiqu esisodwa Pachira Macrocarpa Amahlamvu amaBonsai Izityalo
Okulandelayo: UParodiya Schumanniana var. UAlbispinus Cactus
Umthi opheleleyo wemali okhulileyo
Isityalo esipheleleyo semithi yemali
Umthi wemali okhule ngokupheleleyo
Utyalo oluLungileyo loMthi
Imithi emnandi yaseTshayina